News Collection: पोर्न साइटका लागि जाडो मौसम अब्बल
पोर्न साइटका लागि जाडो मौसम अब्बल
मान्छेले कुन मौसममा बढि पोर्न सामाग्री हेर्छ होला ? पोर्न सामाग्री हेर्दै नहेरेकाको त के कुरा भयो र ? तर यस्ता सामाग्री हेर्नेहरुको हकमा भने जाडो मौसम सबैभन्दा बढि व्यस्त समय भएको पाइएको छ ।
अमेरिकामा गरिएको एक अध्ययनले मानिसहरुले जाडो याममा बढि अश्लिल सामाग्रीहरु हेर्ने गरेको पाइएको छ । बढि पोर्न सामाग्र्रीहरु अनलाइनमा खोजेर हेरिने मौसमका रुपमा जाडो यामसँगै गर्मी यामको सुरुवाती बेला पनि उत्तिकै रोजाइमा पर्ने गरेको छ ।
पेन्सिल्भेनियाको भिलानोभा विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले पछिल्लो पाँच वर्षसम्म अनलाइनमा खोजिएका सामाग्रीहरुमा गरेको अध्ययनले जाडो मौसम तथा गर्मी यामको सुरुवाती बेला यौन सामाग्री अनलाइनमा सबैभन्दा बढि हेरिने मौसमका रुपमा रहेका छन् । शोधकर्ताहरुले पछिल्लो पाँच वर्षसम्म अनलाइनमा खोजी गरिएका विभिन्न अश्लील तस्वीर तथा भिडियोहरुको दरलाई विश्लेषण गरेका थिए ।
हरेक ६ महिनाको चक्रमा त्यस्ता तथ्यांकहरुलाई राखेर विश्लेषण गर्दा जाडो याम तथा गर्मी याम सुरु हुनै लाग्ोको बेला मान्छेले इन्टरनेटमा बढि यौन सम्बन्धी कुराहरु हेर्ने गरेको देखियो । यस्तो मौसममा वेश्यावृत्तिका लागि अनलाइन मार्फत सबैभन्दा बढि चाहना समेत व्यक्त हुने गरेको छ । विभिन्न डेटिङ साइटहरुमा समेत जाडो याममा प्रयोगकर्ताको संख्या निकै ठूलो हुने गरेको देखिएको छ ।
वास्तवमा जाडो याम तथा गर्मीको सुरुवात तिर अश्लील सामाग्री हेर्ने दर बढ्नुमा मान्छेको जैविक यौन प्रक्रिया वा सक्रियता मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । मानिस जाडो याम तथा गर्मी यामको सुरुवाती दिनहरुमा यौनिक रुपमा बढि सक्रिय हुने भएकाले आफ्नो यौनेक्षा पूर्ति गर्न बढि अश्लिल साइटहरु हेर्ने तथा अश्लील दृश्य तथा भिडियोहरुमा क्लिक गर्ने गर्छ । साथै उक्त मौसममा धेरैजसो पश्चिमा मुलुकहरुमा धेरै विदाको समय पर्ने भएकाले पनि मानिसहरुले फुर्सदको समयमा रमाइलो गर्न अश्लिल सामाग्रीहरु खोजीखोजी हेर्ने गरेका बताइएको छ ।